चुनावी घोषणा पत्र पुरा गरे ! आफूले गरेको काम प्रति सन्तुष्ट छु: अध्यक्ष ढकाल « Bagmati Page
चुनावी घोषणा पत्र पुरा गरे ! आफूले गरेको काम प्रति सन्तुष्ट छु: अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । विकास निर्माणका कामलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ विभिन्न कामहरु तीब्र गतिमा गर्दै आएको टोखाले पुर्वाधार विकास निर्माणका कामलाई विशेष महत्वका साथ अन्तिम चरमा पुर्याएको छ । निर्वाचन अघि जनतामाझ जाँदा विभिन्न कामहरु गर्छु भनि विभिन्न आश्वासन दिँदै जनताको घर-दैलोमा पुगेको टोखा-५ का वडाध्यक्ष जगन्नाथ ढकाल लागायतका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पुर्ण काम पुरा गरेको बताएका छन् ।
वडाध्यक्ष ढकाल खुशी हुँदै भन्छन्,- ‘जनतामाझ जाँदा जम्मा २० वटा बुदा लिएर भोट माग्न गएका थियौं । घोषणा पत्रमा भएका मात्र नभएर वडावासीका सयौं समस्या र मागहरु अनुसारका काम पुरा गर्दा वडावासी दंग छन् । तर मलाई भने एउटै कुराले दुःखी बनाएको छ ।’
जसमा घोषणा पत्रमा भएका १९ वटा काम पुरा गरेका छौ, एउटा काम भने अझै सम्पन्न गर्न बाँकी छ । त्यो पुरा गरेपछि बल्ल मनमा शान्ती छाउँछ अध्यक्ष ढकालले भने ।
अव्यवस्थित बिजुलीका तारलाई अन्डर ग्राउण्ड गर्ने भनिएको काम पुरा भएको छैन । काम गर्ने कोषिस जारी नै छ, त्यो काम हाम्रो कार्यकालमा पुरा गरेरै छोड्छौं । उनले थपे यो काम बाहेक घोषणा पत्रामा भनिएका १९ वटा काम पुरा भएका छन् । विकास निर्माणका काममा कुनै किसिमको कन्जुस्याँई नगरी निरन्तर वडावासीले सेवामा लागेका छौं । वडामा भएका समस्या समाधान गर्न कहिल्यै पछि हटेको छैन । सेवा गर्न आएका हौं सबैलाई समान किसिमको सेवा दिएका छौं ।
कुनैपनि काम गर्दा गुणस्तरमा निकै ध्यान पूर्वक काम गरेको जानकारी गराउँदै सडक बनाउनु अघि विद्युतको पहुँच छ कि छैन ? ढलको अवस्था कस्तो छ ? खानेपानीको पाईप लाईनको अवस्था के छ ? पाईप कति वर्ष अगाडी हालेको हो ? बस्ति अनुसार पुग्ने छ कि छैन ? त्यसले दीर्घकालिन रुपमा धान्छ कि धान्दैन ? लगायतका सम्पूणर् कुराहरुको सुक्ष्म अध्ययन पछि मात्र सडक पीच, ढलान तथा कालो पत्र गर्ने कामलाई अगाडी बढाउँछौं ।
विकास निर्माणका कामलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ विभिन्न कामहरु तीब्र गतिमा गर्दै आएको टोखा-५ ले हाल पूर्वाधार विकासको ९० प्रतिशत भन्दा बढि काम गर्न सफल भएको छ ।
हाम्रो वडाबाट भएका सम्पुर्ण कामहरु पारदर्शि ढंगले गरिएको छ । अध्यक्ष ढकालले थपे ‘वडावासीहरु खुशी नै देखिन्छन्, काम भएन भनेर वडामा खासै गुनासो आएको पाईदैन, यसैमा म आफूले गरेको काम प्रति पुर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु ।’
जनताले तिरेको करको सही रुपमा सदुपयोग गर्ने र जनताको सीर झुक्ने कुनैपनि किसिमका काम गर्न नहुने र नगर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।